बाबुराम-उपेन्द्रको चाहना पनि गठबन्धनतिरै! – SidhaRekha
बाबुराम-उपेन्द्रको चाहना पनि गठबन्धनतिरै!
२०७४ पुष १७, सोमबार ०६:५८ January 1, 2018
उपेन्द्रको ओलीसँग र बाबुरामको ओली-दाहालसँगको भेटको मूल मक्सद पनि त्यसैभित्र निहित छ । एमाले-माओवादी दुवै दलले कांग्रेस र राजपालाई छाडेर उपेन्द्र र बाबुरामलाई भने आफूतिरै तान्ने प्रयास जारी राखेका बेला उनीहरूले पनि गठबन्धनतिरै ढल्किने संकेत गरेका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छ ।
तर, एमाले-माओवादीले पार्टी एकता गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नराखी समाजवादी नाम राखेमा आफूहरूलाई पनि एकतामा आउन सहज हुने उनीहरूको तर्क छ । आइतबार माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई दम्पतीको भेटको अन्तर्य पनि त्यसैभित्र निहित रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ ।
आफ्नै नयाँ निवास खुमलटारमा भेट गर्न आइपुगेका भट्टराईलाई दाहालले मूलधारमै आउन आग्रह गरेका थिए । ‘बाबुरामजी पनि कांग्रेसतिर जानुहुन्न, उहाँको एउटै कुरा कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नराखी समाजवादी पार्टी राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ,’ माओवादी नेता पौडेलले भने, ‘उहाँहरूलाई यतै ल्याउने पहल जारी छ ।’
अघिल्लोडेढ सय गुप्तचरको जागिर गयो
पछिल्लोप्रचण्डको खुलासा: प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक माओवादीलाई